How to SaveaFailing Business? — Balance Professional Services
အကျဖက်ကို ဦးတည်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဘယ်လိုကယ်တင်မလဲ
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအနေနဲ့ ငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းလာတာနဲ့အမျှ ဒီ ၂၀၁၆ ကနေ ၂၀၁၈ နှစ်ပိုင်းတွေမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ စီးပွားရေးတွေကျဆင်းနေတယ်။ လုပ်ငန်းတွေအဆင်မပြေကျဘူး ဆိုပြီး တော်တော်များများ ကြားနေရပါသည်။ ရောင်းအားတွေကျဆင်းနေတယ်၊ အမြတ်အစွန်းတွေ လျော့နည်းလာတယ်ပေါ့ဗျာ။ အခက်အခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်သန်ဖို့ အတွက် အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်တွင် စီးပွားများရှင်သန်ဖို့ အဓိက အရေးပါတဲ့ စီးပွားရေး ဗျူဟာ များကိုကောင်နှုတ် ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
အချိန်တစ်ခုပေးပြီး ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ အားသာချက် ၊ အားနည်းချက်တွေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ ဈေးကွက် ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ အောက်ပါမေးခွန်းတွေကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးကြည့်ပါ။
Customers တွေက ကိုယ့်ရဲ့ Product (သို့ ) ကိုယ်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှု့ ကိုဝယ်ချင်သုံးချင်နေတုန်းပဲလား။
ကိုယ့်စီးပွားရေးစလုပ်တဲ့အချိန်တွေကစပီး လုပ်ငန်းတွေ ၊ ပုံစံတွေ ဘာတွေ ပြောင်းလဲသွားပြီလဲ?
ကိုယ်ကရော ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ လိုက်ပီး ပြောင်းလဲနိုင်ရဲ့လား။ အဲလိုမပြောင်းလဲနိုင်သေးဘူး ဆိုရင် ကိုယ်ရဲ့ လုပ်ငန်းရှင်သန်ဖို့အတွက် ဘာတွေပြောင်းလဲဖို့ လိုသလဲ။
ကိုယ်က Product အသစ်တစ်ခု ၊ ဝန်ဆောင်မှု အသစ်တစ်ခုပေးဖို့လိုနေပြီလား?
Customer တွေလိုချင်တာ ၊ ဝယ်ချင်တာတွေကို မမှန်းကြည့်ပါနဲ့ ၊ မယူဆပါနဲ့။ ကိုယ်ရဲ့ ရောင်းအားတွေကို စီစစ်ပါ၊ Customer တွေကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး စကားပြောကြည့်ပါ။သူတို့ ဘာတွေ လိုအပ်သလဲ ၊ လိုချင်သလဲ? ကိုယ်ကဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်၊ ရောင်းပေးနိုင်သလဲ? သူတို့ရဲ့ အခက်အခဲတွေ ပြေလည်သွားအောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သလဲ?
ဘယ် Product တွေ ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေက အမြတ်များများ ရစေမှာလဲ? ကိုယ့်ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှု့ Product တွေကို ပုံမှန်ဝယ်ယူသုံးစွဲဖို့ ထူးခြားချက်တွေ ၊ ဆွဲဆောင်မှုတွေရှိလား စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။
သင့်ရဲ့ Products တွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို Internet ပေါ်တွင် ရောင်းပါသလား။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Internet ပေါ်ရောင်းပြီဆိုတာနဲ့ Facebook လို Social Media မျိုးကို တန်းမြင်ကြမှာပါပဲ။ ကိုယ်က Online ပေါ်တွင် မရောင်းချင်ဘူးဆိုလျှင်တောင် Online မှကြော်ငြာတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကုိယ့်ကုန်ပစ္စည်း Branding ကိုတည်ဆောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ Page တွေထောင်ပြီး ကိုယ့်လုပ်ငန်းက ရောင်းချတဲ့ Products များ ၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖော်ပြထားပါ။ Comment တွေပြန်ရေးဖို့၊ မေးခွန်းတွေ ပြန်ဖြေဖို့ ၊ Message တွေကို အမြန်ဆုံး Reply လုပ်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ Product ကိုဝယ်ယူအားပေးတာရပ်သွားတဲ့ Customer တွေကို နောက်ဘယ်တော့မှ ပြန်လည်ဝယ်ယူတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မယူဆပါနဲ့ ။
သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေက ပြောင်းလဲနေတာပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ ပြိုင်ဘက်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ Product တွေကို သုံးစွဲပြီး သဘောမကျတဲ့သူတွေလည်း ကိုယ့်ဆီပြန်လာနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိ ၊ အရင်ကဖောက်သည် (Customer)တွေရဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေကိုလည်း ဆက်သွယ်ပါ။
Company တစ်ခုက ကိုယ့်ရဲ့ Product တစ်ခုကို လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင် ၊ သူတို့ရဲ့ ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းတူ Company များကလည်း လိုနေနိုင်ပါတယ်
Trade Shows , Seminars စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မိတ်ဆွေလည်း အများကြီး အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့ တွေ့ဆုံ ဆက်ဆံရတဲ့ လူတွေက ကိုယ်ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမလိုအပ်ရင်တောင် လိုအပ်တဲ့သူတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှာ အမှန်ပါဘဲ။
ကုန်ပစ္စည်း အသစ် ၊ ဝန်ဆောင်မှု အသစ်များကို ရှိပြီးသား ဖောက်သည်များဆီရောင်းချခြင်း
ကိုယ့်ရဲ့ Customer များရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို အမြဲစောင့်ကြည့်ပီး သူတို့ရဲ့ လိုအပ်တဲ့ Product များ ၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရောင်းချပေးပါ။ ကိုယ်ဘယ်လို ဝန်ဆောင်မှုပေးလိုက်ရင် သူတို့ ပိုအဆင်ပြေသွားမလည်း၊ ဘယ်လို Product ရောင်းချပေးရင် သူတို့နဲ့ ပိုအဆင်ပြေမလည်း အမြဲတမ်း စီစစ်လေ့လာထားပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ Product တွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေ အတွက် အခွင့်အလမ်းများကို အမြဲတမ်း နားစွင့်ထားပါ။
လုပ်ငန်းတူ ဘဘာဝတူ သူများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ရောင်းချခြင်း
ဥပမာဗျာ ကိုယ်က အသားကင်ရောင်းတယ်ဆိုပါစို့၊ အသားကင်နဲ့ တွဲဖက်စားသုံးနိုင်သော စားစရာများ၊ အအေးများ ရောင်းချသောသူနဲ့ ပူးပေါင်းရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Customer များလည်း ကိုယ့်ဆီ ရောက်လာနိုင်ပါတယ် (နှစ်ဦး နှစ်ဖက် Win-Win ပေါ့)။ကိုယ်က စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားရင်လည်း Delivery Service Company တစ်ခုနဲ့ ပူးပေါင်းရောင်းချတာမျိုးပေါ့။
ကိုယ်က စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားရင် Delivery Service ထပ်တိုးခြင်း ၊ Catering Service ထပ်မံတိုးချဲ့ခြင်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ကားဝပ်ရှော့ တစ်ခုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ရင်လည်း ကားအလှဆင် လုပ်ငန်းတစ်ခု ထပ်တိုး ချဲ့တာ၊ ရေးဆေးဆီလိုက် ထပ်တိုးချဲ့ တာမျိူး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ စတိုးဆိုင်ဆိုရင်လည်း ပစ္စည်း အသစ်တွေ ရောင်းချတာ ၊ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ကိုယ့်ရဲ့ အဓိက လုပ်ငန်းကို အခြေခံပြီး ငွေဝင်ရလမ်းများကို ထပ်မံဖန်တီးနိုင်ပါသည်။
ကုန်ကြမ်းသွင်းသူများထံမှ Discount တောင်းခံခြင်း
ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအတွက် ကုန်ကြမ်းရောင်းချသူများထံတွင် Discount တောင်းယူသင့်ပါသည်။ တောင်းယူရာတွင်လည်း ကိုယ်ကပုံမှန်ဖောက်သည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ခနခနဝယ်ကြောင်း သူတို့ကို အသိပေးပါ။ သူတို့ရဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေက ဈေးချပေးလျှင် သူတို့ကိုလည်း ဈေးချပေးရန်အတွက်တောင်းဆိုပါ။
လက်ရှိ ကုန်ကြမ်းရောင်းချပေးသူက ဈေးကြီးလျှင်(သို့) ကုန်ပစ္စည်း အရည်အသွေးညံ့နေလျှင် ပြောင်းလဲဝယ်ယူဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ပိုပြီးဈေးသက်သာ၊ ပိုပြီးအရည်အသွေးကောင်းသော သူဆီမှ ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
အလွဲသုံးစားမှုများ၊ ငွေယိုပေါက်များကို သတိထားစောင့်ကြည့်ခြင်း
ဘယ်လုပ်ငန်းရှင်ကမှ သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေက အလွဲသုံးစားလုပ်နေတယ်၊ ခိုးယူနေတယ်လို့ မထင်မြင်ချင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းတွေမှာ အလွဲသုံးစားမှုတွေနဲ့ ခိုးယူမှုတွေကို အနည်းနဲ့ အများကြုံတွေ့ နေရပါတယ်။ အလွဲသုံးစားမှုတွေ၊ ခိုးယူမှုတွေကြောင့် လုပ်ငန်းပျက်စီးပြိုလဲသွားသည်အထိ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ လက်သည်သည် ယုံကြည်ရသော ဝန်ထမ်း၊ မန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ နောက်တစ်ချက်က စီးပွားရေးကျနေချိန်မှာ ငွေယိုပေါက်တွေကို အချိန်မီ ပိတ်နိုင်ပါစေ၊ ငွေယိုပေါက်တွေ/ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေကို ခြေရာခံမိဖို့လည်း Accounting နဲ့ စာရင်းဇယားပိုင်း မှန်ကန်တိကျပါစေ။
ညံ့ဖျင်းသော၊ ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းသော ဝန်ထမ်းများကို ထုတ်ပယ်ခြင်း
ဘယ်လုပ်ငန်းရှင်မှ ကိုယ်ရဲ့ရှိပြီးသား ဝန်ထမ်းတွေကို ထုတ်ပယ်ရတာ မကြိုက်ပါဘူး။ သူတို့ကို အလုပ်ထုတ်တဲ့အကြောင်းပြောရတာ ဝန်လေးနေတာ(သို့) သူတို့မိသားစုကို သင်က သနားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်း ခက်ခဲကျဆင်းနေတဲ့ အချိန်မျာတော့ ညံ့ဖျင်းသော၊ Productivity မရှိသော ဝန်ထမ်းများကို အမြန်ဆုံးထုတ်ပယ်သင့်ပါတယ်။
Bonus များ၊ လစာများကို လျော့ချခြင်း
လုပ်ငန်း အဆင်မပြေဖြစ်လာရင် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ Bonus တွေ၊ လစာတွေကို လျော့ချသင့်ပါတယ်။ ရုံးတွင်း အသုံးစရိတ်တွေ လျော့ရပါမယ်။ တစ်ချို့ဝန်ထမ်းတွေ ထွက်သွားကောင်း ထွက်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ကုန်ကျစရိတ်တွေ လျော့ချလိုက်ခြင်းကြောင့် သင့်လုပ်ငန်းကို ကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။
အလုပ်မဖြစ်တဲ့ ကြော်ငြာတွေကို အဆုံးသတ်ခြင်း
ကိုယ့် Product အတွက် ကြေငြာတွေ၊ Marketing တွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို သေသေချာချာ သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ကုန်ကျလိုက်တာနဲ့ တန်အောင်ရောင်းအားတွေတက်လာသလား ဆိုတာအမြဲစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျများပြီး အလုပ်မဖြစ်တဲ့ ကြေငြာတွေ၊ Marketing တွေကို အမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်သင့်ပါတယ်။
ငွေကုန်ကြေးကျနည်းတဲ့ ကြေငြာ၊ Marketing တွေကို အသုံးပြုခြင်း
ငွေကုန်နည်းပြီး ထိရောက်သော Marketing များ၊ ကြေငြာများကို အကောင်းဆုံးအသုံးပြုပါ။ လုပ်ငန်းတူတွေ ဘယ်လိုဗျူဟာတွေ သုံးနေလည်းဆိုတာကို အမြဲစောင့်ကြည့်ပါ။ အထူးသဖြင့် Social Media Advertising ဟာကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဖောက်သည်တွေဆီရောက်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်တာနဲ့ အမျှ သင်သည် ပြောင်းလဲရမည့်အရာများကို မြင်လာမည် ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးပြောင်းလဲဖို့နဲ့ အမြတ်အစွန်းရရှိရေးအတွက် အဓိကသော့ချက်ကတော့ မဖြစ်မနေလုပ်ရမည့်၊ ပြောင်းလဲရမည့် အရာတွေကို စာရင်းပြုစုပြီး ပြောင်းလဲခြင်းတွေကြောင့် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာကိုပါ တွက်ချက်ထားသင့်ပါတယ်။ ပြီးရင် ဦးစားပေးပြီး ဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများ ကို စာရင်းပြုစုထားပါ။ အမြတ်အစွန်းများ ဘယ်လိုအလွယ်ကူဆုံးနှင့် အမြန်ဆုံး ရနိုင်သလဲ? ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေး ရေရှည်ခိုင်မြဲဖို့အတွက် ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ရလာတဲ့အဖြပေါ် မူတည်ပြီး စီးပွားရေး စီမံချက်တစ်ခုရေးဆွဲပြီး စတင်လုပ်ဆောင်ပါ။
ထက်ခိုင် (Business Development) , ရဲရင့် (Client Success)